Lahatsoratra nataon'i Cáit Power momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Herin'ny Cáit
Efa am-polony taona no nisian'ny finday avo lenta sy finday tsara. Mampiseho ny angon-drakitra fa amin'ny taona 2018, dia hisy mpampiasa smartphone 2.53 miliara manerantany. Ny mpampiasa antonony dia manana fampiharana 27 amin'ny fitaovany. Ahoana no anaovan'ny orinasa ny tabataba rehefa be ny fifaninanana? Ny valiny dia mitoetra amin'ny fomba fitarihana data momba ny marketing amin'ny fampiharana sy ny fahazoana ny lesona avy amin'ireo mpivarotra finday izay mamono azy io any an-tsahan'izy ireo. Ny sehatry ny lalao,